Pokémon Go dia azo alaina ao amin'ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Pokémon Go dia azo alaina ao amin'ny Apple Watch izao
Jordi Gimenez | | Apple Watch, Lalao IPhone
Niandry ny fifanarahan'ny Pokémon Go miaraka amin'ny Apple Watch efa ela izahay ary minitra vitsy lasa izay ny fanavaozana kinova 1.21.2 izay mahatonga ny fiambenana Apple hifanaraka amin'ity lalao ity.
Amin'izao fotoana izao dia afaka milaza isika fa izay nanampy tamin'ny famaritana ity fanavaozana ity dia mazava sy mivantana, Pokémon Go for Apps Watch ary vahaolana amin'ireo lesoka madinidinika. Amin'izany, voamarina amin'ny fomba ofisialy ny sioka navoakan'izy ireo avy any Niantic tamin'ny 17 desambra, milaza fa akaiky tokoa ilay kinova vaovao nifanaraka tamin'ny famantaranandro maranin'i Apple. Vao 5 andro izao ary efa ananantsika io fanavaozana io.
Ity ny bitsika avy amin'ny developer Niantic izay nitateran'izy ireo ny fandefasana tsy ho ela:
- GO Pokemon (@PokemonGoApp) Desambra 17 amin'ny 2016
Etsy ankilany, tsy maintsy lazaina fa nanokana ny fotoanany izy ireo ary tsy manana isan'ny mpampiasa efa azony tany am-piandohana intsony ny lalao, fa ireo mpampiasa nanohy nilalao sy manana famantaranandro Apple dia hahazo valisoa. Mazava ho azy izao miaraka amin'ity kinova vaovao ity izay mifanaraka amin'ny Apple watch, dia nahetsika kely kokoa ilay zavatra. Ireto ny sasany amin'ireo sary nalaina tamin'ny fampiharana napetraka ao amin'ny Apple Watch:
1 Ahoana no ampidirako azy amin'ny famantaranandroko?
2 Inona no ampiany amin'ny Apple Watch?
Ahoana no ampidirako azy amin'ny famantaranandroko?
Ny rindranasa dia alaina mitovy amin'ny fanavaozana hafa rehetra nanomboka teo dia tafiditra ao amin'ny fampiharana iPhoneNa izany aza, mety maharitra ela kokoa noho ny andrasana ny fanisana ny isan'ny mpampiasa izay hanavao amin'izao fotoana izao sy amin'ny ora aorian'ny famoahana ity fanavaozana ity. Amin'ity tranga ity dia tsara kokoa ny manam-paharetana ary aza mijanona ny fampidinana na dia hitantsika aza fa tsy mandroso haingana be izy io. Raha vao sintonina dia voatery ampidiro ny fampiharana iPhone Watch ary tsindrio ny seho amin'ny Apple Watch.
Inona no ampiany amin'ny Apple Watch?
Ity no ampahany izay andrasantsika rehetra, hijerena ary hitsapana ny fampiharana amin'ny fiambenana. Ny fampiasana dia tsotra sy intuitive satria tafiditra ao mandray fampandrenesana amin'ny lalao amin'ny fiambenanay. Azontsika atao ny manomboka ny fivoriana mivantana avy amin'ny famantaranandro mihitsy, hahazo fampandrenesana momba ny Pokémon ananantsika eo akaiky eo izahay, ny pokeparadas ary ny mombamomba ireo badge na atody misy marika, azontsika atao ihany koa ny mahita ireo dingana sisa tavela mba hanokafan'ny atody Pokémon amin'ny ora rehetra amin'ny ora.
Noraisiny izany fa ny fampiharana efa nandrasana hatry ny ela an'ny Pokémon Go ho an'ny fiambenana Apple dia efa misy izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Pokémon Go dia azo alaina ao amin'ny Apple Watch izao
Hatramin'ny nanavaozako ny kinova farany dia tsy misokatra ... manana jailbreak aho ary talohan'ny niasa tonga lafatra. Misy mahatsapa izany ve ??
Mario Solera Muñoz dia hoy izy:
Notsapaiko nandritra ny adiny 4 io maraina io; na ny Watch na ny iPhone dia samy niampanga 100% ary nifarana tamin'ny 30% sy 50% avy. Ny elanelana lavitra dia tsy nampiharina tamin'ny fahazoana vatomamy na fiompiana atody, ary ny fampandrenesana pokemon roa (2 Rattatas, izay nahagaga) dia tsy nifanaraka tamin'ny fisehoana tena izy tamin'ny finday. Mahatsapa aho fa tena tsy misy ilana azy ireo mihitsy.
Valiny tamin'i Mario Solera Muñoz
Ohatrinona no aloanao amin'ny Super Mario Run? Nintendo te-hahalala